Asa | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
Joobl ho any Turkey Job: Doka Chauffeur
Tsy nanambara ny valin'ny fitiliana am-bava ny TCDD ho an'ny fandraisana mpiasa mpiasa mandritra ny telo volana. Raha ny vaovao momba ny tsy fahombiazan'ny manambara ny valin'ny dinidinika fandraisana mpiasa TCDD; Ny fitaterana TC momba ny fanambarana ny valin'ny fanadinana momba ny fizotry ny fanarenana izay nataon'ny TCDD [More ...]
Nanambara i TÜVASAŞ fa handray mpiasa injeniera 12 izy ireo ho an'ny tetikasan'ny fiarandalamby nasionaly. Ny tetikasa fiaran-dalamby nasionaly, Mekanikal, elektronika, indostria, metallurgical, rindrambaiko ary diplaoma injeniera amin'ny informatika, KPSS ary kandida YDS'den dia tombanana amin'ny 70 farafaharatsiny. [More ...]
BURULAŞ, orinasam-paritry ny munisipalin'ny Bursa Metropolitan, dia nanambara fa hanao fisafoana maharitra ny 5 hanendrena ireo faritra misy ny toeram-piantsonan-tena amin'ireo toerana fanompoana isan-karazany ao amin'ny sisin'ny faritany Bursa. Araka ny fampandrenesana, dia hiakatra any BURULAŞ ireo olona hiasa miasa toy ny mpiandraikitra ny toerana eo amin'ny faritra fiantsonan'ny fiara. [More ...]
Ny mpamily bus 10 vehivavy dia handray karama rehefa miasa ao amin'ny EGO General Directorate of Ankara Metropolitan Munisipaly. • mpamily kely indrindra ho an'ny mari-pahaizana diplaoma ambony ary 3 traikefa amin'ny fiara mitondra traikefa mavitrika [More ...]
Voalohany ao amin'ny tantaran'ny IETT: 'Hentina ny mpamily vehivavy'
Ben'ny tanàna Ekrem İmamoğlu, izay nampanantena fa "ny vehivavy dia hanana teny ao an-tanàna sy eo amin'ny fitantanan-draharaha" dia nampanantena hifidy ireo mpamily ilain'ny IETT amin'ny vehivavy. Tale jeneralin'ny IETT, iray amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny Kaominina Istanbul Metropolitan, filohan'ny IMM [More ...]
TÜLOMSAŞ Fampandrenesana Hividianana Mpiasa Matetika Navoaka
Araka ny fanambarana navoakan'ny İŞKUR, ny TÜLOMSAŞ dia hanao fividianana amin'ny faritra samihafa noho ny tsy fisian'ny olona miasa. Ireto ny teny sy ny antsipirihany. 30 septambra Fandraisana mpiasa avy amin'ny andrim-panjakana araka ny dokambarotra navoaka tamin'ny 2019 [More ...]
Eskişehir Metropolitan Municipality ESTRAM 5 dia nanambara fanambaram-pananana maharitra. Raha ny filazan'ny fanambarana 1 rafi-piotazom-bary dia manome marika ny fanamboarana sy fanamboarana azy, dia hiasa ny fanamboarana milina 4. Sata ny mpiasa raisina [More ...]
Ny Kaominin'i Mersin Metropolitan dia hanao asa fanaraha-maso ny vehivavy 100
Ny Kaominin'i Mersin Metropolitan dia nanambara ny fahazoana mpiasa 100 vehivavy izay hiasa ao amin'ny saha. Ny ben'ny tanànan'i Mersin Metropolitan Vahap Seçer, dia nanomboka niasa tamin'ny fandraisana mpiasa an-trano. Hoy ny ben'ny tanàna Seçer, raha tsy izany dia tiako ho lasa tsara tarehy kokoa i Mersin. [More ...]
Eskişehir Metropolitan Munich dia nanambara ny fividianana mpamily 65. Azonao atao ny mianatra avy amin'ny vaovao ataonay momba ny toe-javatra fividianana sy fangatahana. Tao anatin'ireo fanambarana vaovao navoaka tao amin'ny İŞKUR, Estram Light Rail Systems Systems Transportation Co nifandray tamin'ny Kaominin'i Eskişehir. avy amin'ny mpamily 65 [More ...]
Ny Tale Jeneralin'ny TCDD Transportation Inc. dia ireo tompon'andraikitra voaheloka taloha, kilemaina ary mpiasa machinista dia hoentina hiatrika ny valin'ny fampiharana apetraka. Kitiho ny valin'ny fampiharana amin'ireo mpilatsaka mpiasa efa resy lahatra Fidio ny valin'ny fampiharana ireo mpiasan'ny mpiasan'ny kilemaina [More ...]
TÜLOMSAŞ Hanao asa famerenam-bola ireo mpiasa efa voamarina teo aloha
Torkia loha masiny sy Engine Industry Corporation avy amin'ny Tale Jeneraly: Ny mpiantoka dia ho voaheloka tahaka ny teo aloha 2 ny Tale Jeneraly ny Posts mpilatsaka mpiasa maharitra. Fandraisana mpiasa dokam-barotra ny fepetra tao amin'ny vohikalan'ny Torkia Business Council 26.08.2019 - 30.08.2019 daty [More ...]
TÜVASAŞ Fananganana Loton'ny Mpanjifa mpiasa tsy tapaka dia nambara
Torkia Wagon Industries Inc. 16 nataon'ny Tale Jeneraly tamin'ny Jolay 2019'da 26 taorian'ny nizarana ilay mpiasa maharitra dia nozaraina. TÜVASAŞ fandraisana an-tànana maro dia vita eo imason'ny besinim-bahoaka. Vokatry ny loteria TAKEN Torkia Wagon Industry (TÜVASAŞ) tamin'ny filokana [More ...]
Torkia Business Association (Teo) hanao asa-panjakana ny asa amin'ny varavarana lamba TCDD navoakan'ny Tale Jeneraly, fara fahakeliny, ny sekoly ambaratonga fototra nahazo diplaoma eo amin'ny kandidà lalamby fikojakojana sy ny fanamboarana tsipika fandraisana fanompoana. Handray amin'ny alàlan'ny İŞKUR ny fangatahana hanao fanambarana momba ny asa [More ...]
TULOMSAS KPSS 2019 / 1 Ampana afovoany ao anatin'ny lisitry ny antontan-taratasy takiana ambara!
Torkia loha masiny sy Engine Industry Inc. (TÜLOMSAŞ) tranonkala ofisialy "https://www.tulomsas.com.tr duyuru dia nanambara tamin'ny fanambarana ny fanadinam-panjakana Misafidy ho an'ny daholobe (KPSS) 2019 / 1 foibe momba ny antontan-taratasy nangatahina avy amin'ireo kandidà. Antontan-taratasy takian'ny mpampiasa ny 7 aogositra 2019 [More ...]
Fampandrenesana mividianana olona amin'ny TCDD Navoaka tao amin'ny DPB
Ny Tale Jeneralin'ny TCDD dia nanambara fa hamerina mpiasa miaraka amina fanambarana izany. Ny fampandrenesana fandraisana an-tànana ny olona ary ny antsipiriany nivoaka tao amin'ny DPB dia ao amin'ny vaovao ataontsika. TCDD PERSONNEL PURCHASING NOTIS [More ...]
Bursa BURULAŞ dia mandray mpiandraikitra ao amin'ny Personal Staff, Driver and Box Office
Araka ny fanambarana navoakan'ny İŞKUR, nanambara i BURULAŞ fa hametraka ny mpiasa 55 amin'ny toerana samihafa. Ity ny fizarana ny mpiasa sy ny fepetra. 25 Jolay 2019 Torkia Business Association Namoaka amidy ny fividianana ny mpiasa-panjakana sy ny mpiasa. Releases [More ...]
TÜVASAŞ dia namoaka fanambarana an-tariby. Vorontsiloza in samihafa pozison hihaona tsy fahampian'ny mpiasa ao anatin'ny TÜVASAŞ Araka ny fanambarana, izay nivoaka tao amin'ny misahana ny asa, dia ho eo amin'ny fandraisana mpiasa 26. Ny fividianana araka ny fanambarana navoaka dia manan-kery ho an'ny mpirotsaka amin'ny Status Normal [More ...]
Torkia Wagon Factory dia namoaka dokambarotra vaovao amin'ny alalan'ny fividianana ny Tale Jeneraly ny Teo. Araka ny fanambaràna amin'ny alalan'ny İŞKUR Wagon Factory 26 maharitra mpiasa dia haverina. Farafaharatsiny ho nahazo mari-pahaizana kandidà avo lenta izay maniry ny hampihatra ny fandraisana mpiasa [More ...]
Torkia sy Torkia loha masiny sy Engine Industry Wagon, fara fahakeliny, ny sekoly ambaratonga faharoa nahazo diplaoma ao anatin'ny faritry ny fanambarana navoakan'ny fandraisana mpiasa ny orinasa 7 sitraponao no hatao. Torkia Wagon Indostria sy ny Torkia loha masiny sy Engine Industry nahazo diplaoma sekoly ambaratonga faharoa kely indrindra kandidà [More ...]